N+ 110512 ကားပါမစ် အခွန် နှင့်ကုန်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » N+ 110512 ကားပါမစ် အခွန် နှင့်ကုန်သည်
N+ 110512 ကားပါမစ် အခွန် နှင့်ကုန်သည်
Posted by nature on May 12, 2012 in Business & Economics, Editor's Notes, Opinions & Discussion | 41 comments
ခုတလောရွာထဲမှာ ဆူနေကြတဲ့ကားပါမစ်အကြောင်းရေးချင်ပေမဲ့ ဇာတ်ထဲက လူရွှင်တော်တွေ ပြောသလို အားရပါးရကချင်ပါသော်လည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်းဆိုသလို တခါတလေပို့စ်တင်ချင်စိတ်ကလေးများဖြစ်လာသော်လည်း ကွန်နက်ရှင်ကမကောင်း သောကြောင့် မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
အခုတလော 2007 အထက်ကားတွေ ပါမစ်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ကားဈေးတွေ ပြုတ်ကျပြီး ကားပွဲစားတွေ ၀ယ်ရောင်းတွေ အကြီးအကျယ်ရှုံးကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်း ရွာသားများ ဖြေဆိုကြစေလိုပါတယ်။
ကားဟောင်းတွေဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာချိန်မှာ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကားအိုကားဟောင်းပိုင်ရှင်တွေဟာ နိုင်ငံတော်ကစေတနာနဲ့ ကားပါမစ်စံနစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် ငိုရာမှ ရီနိုင်လာကြပြီးစင်ပေါ်ရောက်သွားကြပါတယ်။ ဖျက်ကားတွေရဲ့ဈေးကပိုလို့တောင်ကောင်းနေတော့ တချို့ဆိုကားကိုဖျက်ရမဲ့အချိန် ဈေးကောင်းရောင်းရမဲ့အချိန်ကိုတောင်မျှော်လင့်စောင့်စားနေရပါတယ်။ အဲ
ခုဒီတခေါက်မှလည်း ပစောက်နံပါတ်တွေပြီးရင်ခဏနားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတော့ ကုန်သည်တွေ အကြိုက်ပေါ့။ ဈေးကတော့ ကျိမ်းသေတက်ပြီဆိုပြီး ကုန်သည်တိုင်းတွက်ထားကြပါတယ်။ ဒီတွက်ကိန်းနဲ့အတူ ကားပါမစ်ဈေးတွေဟာလည်း ကုန်သည်တွေရဲ့ တွက်ကိန်းအတိုင်း တရိပ်ရိပ်တက်လာပါတယ်။ ၁၃၅-၁၄၀ သိန်းလောက် ရှိတဲ့ပါမစ်တွေ ၁၅၀သိန်း ကျော်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆေးခါးကြီးအတိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၀၇အထက်မော်ဒယ်တွေ ပါမစ်မလိုပဲသွင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာပါတယ်။ ကားဈေးကွက်တခုလုံး ငရဲကျသလိုပွက်လောရိုက်သွားပါတယ်။ ဈေးတွေထိုးကျကုန်ပါတယ်။လောဘနဲ့ပါမစ်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ အတင်းထိုးရောင်းတာကြောင့် ကားပါမစ်ဈေးဟာ ၁၀၀သိန်းအောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ ကားပါမစ်ဈေးတွေ နေ့ခြင်းညခြင်း သိန်း ၅၀-၆၀ လောက်ထိုးကျသွားပါတယ်။ ရွှေငါးတွေဆို ၂၁၅-၂၂၅ သိန်းလောက်အထိ ဆင်းသွားပါတယ်။
၄။နေ့မြင်ညပျောက်ဆိုတဲ့တရားသဘောကို ကုန်သည်တွေကိုလက်တွေ့ပြနေတာလား။ J
၆။ စီး၍ရသောကားဟောင်းများသည် အနည်းဆုံး ၁၀ သိန်းခန့်ဝန်းကျင်မှ သံတုံးတစ်တုံး ဖြစ်သွားသဖြင့် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ခန့်သာတန်တော့သဖြင့် မည်သူသည်ဆုံးရှုံး၍ မည်သူမြတ်လေသနည်း။
၇။ကားဂျမ်းများပိုမိုမဆိုးဝါးလာစေရန် ၊ ကားအစီးရေ constant ဖြစ်စေရန် ကားပါမစ်စံနစ်ကို ကျင့်သုံးရခြင်းဖြစ်သည်။ ကားဟောင်းများနေရာတွင်ကားသစ်များ အစားထိုးခြင်းဖြင့် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်စေရန်။
မြန်မာနိုင်ငံမှတော့ကုန်သည်တွေလောဘကြီးတယ်။ဈေးကစားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆ တော်တော်များများရှိကြပါတယ်။ ကုန်သည်တွေဈေးကစားတယ်ဆိုတာထက် လူတိုင်းဟာလောဘသားတွေကြီးပါပဲ။ ဈေးကစားတယ်ဆိုတာလဲ ကစားခွင့်ပေးတဲ့ပေါ်လစီမျိုးဖြစ်နေလို့ ကစားလို့ရလို့ကစားတာပါ။ မှန်ကန်ခိုင်မာပြီးတိကျတဲ့ ပေါ်လစီ မျိုးရေးဆွဲနိုင်ရင်ဈေးကစားတာ ပပျောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ယခင်ကပေါ်လစီများကြောင့်ကားဈေးတွေဟာ တစ်စီးကို သိန်း ၄၀၀၀-၅၀၀၀ လောက်အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို အများစု အမြင်မှာတော့ ကုန်သည်တွေဈေးကစားလို့တက်သွားတယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ အားနည်းတဲ့ ပျော့ကွက်ရှိတဲ့ပေါ်လစီ ကို ကုန်သည်တွေက အခွင့်ကောင်းယူအသုံးချသွား တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အခုပေါ်လစီနဲ့ကားတစ်စီ သိန်း၄၀၀၀ – ၅၀၀၀ ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှ ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ပေါ်လစီ မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကုန်သည်တွေကအားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူအသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အတွက် ပေါ်လစီတွေပြောင်းရပါတယ်။ ပေါ်လစီပြောင်းတဲ့အခါသတင်းဦးတဲ့ကုန်သည်က ဦးသလို အခွင့်ကောင်းယူတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဈေးကစားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဟာ ကုန်သည်တွေ လောဘကြီးတာတခုတည်းမဟုတ်ပဲ မှန်ကန်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပေါ်လစီကြောင့် လဲပါတယ်လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။
ပေါ်လစီဆိုတာဇက်ကြိုးလိုပါပဲ။ ကိုလိုရာကိုထိမ်းကြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ နွားလှည်းမောင်းတဲ့သူဟာ ကိုယ်လိုရာသွားနိုင်ဖို့ဇက်ကြိုးကို အသုံးပြုပြီးနွားကို ခိုင်းရပါတယ်။ ဇက်ကြိုးဆိုတာလည်း ကိုင်တတ်မှပါ။ ကိုင်တတ်တာတောင်မှ ပေကပ်ကပ်ကပ်နွားမျိုးကလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။
ကားပါမစ် နဲ့အခွန်ရဲ့ပေါ်လစီတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကားတွေသာတင်သွင်းလာကြတာဟာလည်းနိုင်ငံတော်အတွက် နစ်နာပါတယ်။ နောင် ၁၀နှစ်ကြာရင် သက်တမ်းနှစ် ၂၀ ဖြစ်ပြီတော်တော်လေးဟောင်းနွမ်းသွားမှာပါ။
ကျုပ် အမြင် အထင်မှာတော့ ခိုင်မာတဲ့ ပေါ်လစီ ဖြစ်မလာသေးသရွေ့ ရွှေ မြေ ကား အားလုံးဟာ ရဟတ် စီးသလို ဖြစ်နေဦးမယ်။
အခုမှဝင်လို့ရလို့အခုမှမန့်ရတယ်။ ပေါ်လစီဆိုတဲ့ကြိုးဟာနွားရဲ့ နဖားကိုဆွဲမိရင်ကိုလိုရာကို သွားလို့ရသလို နဖားမဆွဲမိပဲ အမြီးဆွဲမိရင်တော့ ကိုယ်လိုရာမရောက်ပဲ နွားဆွဲတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ရမှာပါ။
ဦးနေးချားရေ…အစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာတော့ ပေါ်လစီကတော့၊ပြောင်းလဲနေအုံးမှာပါပဲ… အဲဒီအထဲက ကောင်းတာလေးတွေကို စုပေါင်းပီးထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ…(၃၅)သိန်းမှ(၁၅)သိန်း၊ထိုမှ (၅)သိန်း မှ (၂)သိန်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဖုန်းဈေးကွက်၊ကားလည်းထိုနည်းလည်းကောင်း ဆိုတော့ ကုန်သည်လည်း ဒီအချိန်မှာ နပ်တဲ့လူစား၊လောဘကြီးရင်ခံပါပဲ။အမှန်က ထိုင်း၊မလေးတို့မှာ မြန်မာငွေ သိန်း(၃၀)လောက်ရှိရင်ကားစီးလို့ရနေပါပီ၊လက်ရှိအခြေအနေပေါက်ဈေးကများနေသေးပါတယ်။နောက်ထပ် ကားကုပ္မဏီကြီးတွေ အလုံးအရင်နဲ့လာရောက်ပီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူတွေကို အလုအယက်ပြုလုပ်လာရင်တော့ ဒီထက်ပိုပီးဈေးများကျဆင်းသွားအုံးမှာပါ၊အကြွေးစနစ်တွေနဲ့ရောင်းပေးရမယ့်အခြေအနေအထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပေါ်လစီကတော့ ကိုယ်လိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကို မရောက်မခြင်းပြောင်းနေရဦးမှာပါ။
ကားအလုံးအရင်းဝင်လာလို့ဈေးကျမယ်ဆိုရင် လမ်းဖောက်ဖို့ ကားဂျမ်းရှင်းဖို့ကိစ္စက မဖြစ်မနေစဉ်းစားရမဲ့အချက်တချက်လို့ထင်ပါတယ်။
သူကြီး ကို ကားတွေကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကိုယ်တိုင်သွင်းတဲ့။ လမ်းတွေလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖောက်တဲ့။ ကားဂျမ်းဖြစ်ရင်တော့အကုန်ဆွဲစိပြစ်မယ်တဲ့။
ကုန်သည် နဲ့ ဈေးသည် ကြားက definition ကို ပြန်ရေးရင် ၀ိုင်းဆဲကြမယ်ထင့်…။
ထားပါဗျာ .. ဈေးကွက်ကိစ္စထပ်ပြောရရင်တော့…
ပေါ်လစီ ကိုလည်း တည်ငြိမ်စေချင်ပါသည်….
ကုန်သည်ကိုလည်း ဈေးသည် စရိုက်များ ကင်းစေချင်ပါသည်…
ထို့အတူ စားသုံးသူကိုလည်း စားသုံးသူ အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရစေချင်ပါသည်…။
ရေးစရာရှိတာရေးပါ။ ရွာထဲဝင်မရလို့ မန့်တာနောက်ကျတာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။
ဖတ်ရူ့ အားပေးသွားပါတယ် ဆရာရေ့
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး တစီးအပ်မှတစီးဘဲသွင်းနိုင်မှာဆိုတော့ အခုလောက်တော့မဆိုးနိုင်ပါဘူး
ထားပါတော့ ဦးဖြူက MarkII 95 စီးနေတယ် ဦးနီကလေးဘီးစီးနေတယ်ပေါ့
ဦးဖြူကားကသိန်း 300 တန်တဲ့အချိန်မှာ ဦးနီကားကသိန်း 50ဘဲတန်မှာပေါ့
ဒါပေမဲ့သိန်း 300 တန်က သိန်း 200 လောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့ သိန်း 50 တန်ကားက 10 သိန်းတော့ဖြစ်မသွားတာသေချာတယ်
ဦးဖြူကားသွင်းဖို့ ဦးနီကားကို 100 နဲ့ပေးဝယ်တော့မှာပါ
ပြန်သွင်းတော့လည်း 2007 အထက်ဆိုတော့သက်သာတာရှာရင်းအားလုံးပေါင်း 200 ကျော်ကျော်ဘဲကျမှာဖြစ်လို့
ကားဈေးတက်လာမယ်ထင်ရင် Taxi တွေကိုအခွန်လွတ်ထပ်ချပေးလိုက်
မရသေးရင်အခုလို Account ဖွင့်ပြီးသွင်းခွင့်ပေးဖြစ်ရမှာပါ
အခုတော့ နောက်ဟာရှေ့ရောက် အားလုံးကမောက်ကမဖြစ် သတင်းရတဲ့သူစား စီးပွါးရေးသမားတွေဈေးကစားတဲ့ပွဲဖြစ်
ဂျပန်ကြီးပျော်လို့ ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းမသင့်မြတ်တာလူသိ နိုင်ငံရေး Image ကျတာပေါ့
ဒီတော့ Think twice လို့ဘဲပြောချင်ပါတယ်ဝန်ကြီးရယ်
ဂျပန်ကကြွေးလျှော်ပေးလိုက်လို့ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို 2007 အထက် 1300 စီစီ ကားတွေ ပါမစ်မလိုတော့တဲ့အတွက် နောက်သွင်းလာမဲ့ကားတွေရဲ့ 50% အထက်ဟာ 1300-1350CC 2007 အထက်ကားတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အစိုးရကနေ ကုမ္ပဏီတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်အောင် များများချပေးလိုက်ရင် ဈေးတွေကျမယ်ထင်ပါတယ်။ စေတနာနဲ့ တစ်ဦးချင်းကိုသာ ပေးတယ်ဆိုရင်လဲ စီးပွားရေးသမားတွေက ဈေးကစားအုံးမှာပါ။ ဟန်းဖုန်းတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ဈေးကွက်ရောင်းချမယ့် ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ဥပဒေများကို မျှော်နေသလိုပေါ့။ အန္တိယ မှာ တာတာကုမ္ပဏီက သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဆင်းရဲသားများပါ လူတိုင်းကားစီးနိုင်အောင် တန်ဘိုးနည်း ကားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးသလိုမျိုး မြန်မာပြည်မှာလည်း ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။ ဘာမဆိုဗျာ..(အခွင့်ထူးခံ) ပွဲစားတွေ၊ အာဏာရှင်လူတွေ၊ ကြားမခံဘဲ စားသုံးသူ၊ အသုံးပြုသူတွေထံ လက်ဝယ်အရောက် ရောင်းပေးစေချင်ပါတယ်။
စားသုံးသူလက်ထဲတိုက်ရိုက်ရောက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သမ၀ါယမတွေထောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာဆိုသလို လယ်သမားကလယ်ပဲစိုက်တတ်ပါတယ်။ အိတ်စပို့သမားကလည်အိတ်စပို့ပဲပို့တတ်ပါတယ်။ လယ်သမားကလည်းစိုက်ပြီးသားထွက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို အိတ်စပို့တိုက်ရိုက် ပို့ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ နေရာအခက်အခဲ ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ Buyer မသိတဲ့အခက်အခဲ စတဲ့အခက်အခဲများစွာ ရှိပါတယ်။ ပွဲစားတွေဆိုတာအခွင့်ထူးခံတွေ မဟုတ်ပါ။ ဈေးနှုံး ခန့်မှန်းမှု ၊ သတင်းဦးမှုနဲ့ ပေါ်လစီကို အားနည်းချက်ရှာရာမှာတော့ဂျပိုးလိုမျိုးတော်တော်ဖြေရှင်းရခက်ပြီး တော်တော်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ပွဲစားဆိုတာရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားအဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းပေးရတဲ့ လိုအပ်တဲ့လူတန်းစားတရပ်လို့မြင်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လို့ ယုံကြည်မှုရနေတဲ့ ပွဲစားတွေရှိသလို တနပ်စားပွဲစားတွေလည်းများပါတယ်။ ပွဲစားတွေမရှိသင့်ဘူးဆိုရင် ပွဲစားနိုင်ငံလို့ လူသိများနေတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံလည်းမရှိသင့်ဘူးလို့ ယူဆရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့.. မြန်မာပြည်ကကား.. ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က.. ရှိတဲ့လမ်းကြောနဲ့ပြောင်းပြန်အနေအထားကားမောင်းသူထိုင်ရတဲ့..(ညာမောင်း)တွေဖြစ်နေပါတယ်..
မြန်မာတွေမှာ.. ကားတိုက်မှုနဲ့.. ကျိုးကမ်းတာတွေ.. အသက်တွေ.. သောင်းချီထုတ်နှုတ်သွားခဲ့မယ်ထင်မိတယ်..။
လုပ်ထုံးဥပဒေက.. ဒီလိုနေရာကန့်သတ်ရမှာပါ..။ ဒါကို ကျုပ်က.. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀ကျော်ကတည်းက.. ဆောင်းပါးတခုရေးခဲ့တာ.. စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးကပိတ်ခဲ့တယ်လေ..
ဖွံ့ဖြိုးပြီး..အာရှနိုင်ငံတွေမှာ.. ကားအဟောင်းတွေပစ်ဖို့..အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့.. မြင်မိ..တွေ့မိပါတယ်.
မြန်မာပြည်ကို..သူတို့ရဲ့.. အမှိုက်ပုံလုပ်တာက.(မြန်မာတွေရဲ့..ထီထွင်ဖန်တီညဉ်နဲ့ နှိုင်းကြည့်ရင်).ပြဿနာသိပ်မရှိ..
အမှိုက်ကို..ဈေးတခုနဲ့ပေးဝယ်ရအောင်ဖြစ်သွားစေတဲ့.. လုပ်ထုံးဥပဒေကို ဖယ်ပစ်ဖြုတ်ပစ်စေချင်တာပါ..
ကားအဟောင်း( ၁၀နှစ်)လောက်ကြာတာ.. လွှင့်ပစ်မယ်ဆိုရင်.. ငွေပေးပြီးမှပစ်လို့ရပါတယ်.
ဂျပန်ပြည် က ကားဟောင်း က သံရည်ကြို စက် ပို့ လို့ ရ သေး တဲ့ အမှိုက် ထက်၊
တရုတ်ပြည် က ပလပ်စတစ်တွေ ကို ကစားစရာ လုပ်ရောင်း ပြီး မြန်မာ ပြည် ထဲ ပစ်နေတဲ့ အမှိုက် က ပို ကြောက် ဖို့ ကောင်းတယ် နော်။
ပုံမှန်အားဖြင့်စဉ်းစားရင်တော့ ကိုယ်အိမ်ထဲကိုအမှိုက်လာပစ်ရင်ပစ်တဲ့သူကို ဓါးနဲ့လိုက်ခုတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဓါးနဲ့လိုက်မခုတ်ပဲ ငွေပေးဝယ်နေရတယ်ဆိုကတည်းက အမှိုက်လို့ယူဆလို့မရဘူး ထင်ပါတယ်။ ပေါချောင်ကောင်းကြိုက်တဲ့မြန်မာ့ဈေးကွက်ကို လိုက်လျှောညီထွေအောင် အကြိုက်လိုက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ marketing ကောင်းလို့ ဖြစ်တာလို့ထင်ပါတယ်။ တရုပ်တွေရဲ့ market response ကလည်းအင်မတန်မြန်ပါတယ်။ ဈေးပေါတဲ့အတွက်ခေတ်မှီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို လူတန်းစားပေါင်းစုံက သုံးနိုင်ပါတယ်။ လူတန်းစားပေါင်းစုံသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဖြုန်းအား (၀ယ်လိုအား) များပါတယ်။ ဈေးပေါတဲ့အတွက်ကြံ့ခိုင်မှုကတော့ အားနည်းပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေကွက်မှာ အကောင်းကြိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေကို ကောင်းတာတွေ ပို့၊ ဈေးချိုတာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဈေးချိုတာပို့ရောင်းနေတဲ့ တရုပ်တွေရဲ့ marketing ပညာဟာ အတုယူစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲတရုပ်ဟာ စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့တရုပ်ကိုအမေရိကန်က ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့သတ်မှတ်လာတာပါ။
အဟီး…..သူကြီးရဲ့ဆောင်းအိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတာ။ ကော်နက်ရှင်ကလည်း မကောင်းတော့ ကိုယ့်ပိုစ့်ကို ကိုယ်တရားသဖြင့်ဘောင်ထဲကမန့်တင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း….။
၁၀နှစ်လောက်ကြာတဲ့ကားဟောင်းတွေလွင့်ပစ်ရင်ပြောနော်သူကြီး။ ငွေပေးပြီးမှပစ်စရာမလိုဘူး။ လက်ခံပေးမယ်။
ကားဈေးပြောင်းလဲမှုတွေက မြန်မာပြည်ကို ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလား… ပြောပေးကြပါအုံးခင်ဗျ
ကားဈေးနှုန်းရဲ့ပြောင်းလွဲမှုအရှုံးအမြတ်ဟာ ကားစီးတဲ့လူတန်းစား ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့လူတန်းစားတခုနဲ့သာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ကျန်တဲ့သူတွေနေနဲ့ကတော့ အနဲနဲ့အများ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ပါမစ်ဈေးရဲ့အပြောင်းအလွဲဟာ ပါမစ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူတွေနဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ကားတွေများလာလို့ လမ်းတွေ သိပ်ကြပ်ပြီး သွားရ လာရ ခက်တာတော့ အမှန်ပဲ.. ကားတွေ အတွက် ကောက်တဲ့ အခွန်တွေနဲ့ လမ်းတွေ ထပ်ချဲ့ရင် ပိုကောင်းလေမလားတွေးမိတယ်။
နောက်ပိုင်း လူတွေက စည်းကမ်းမရှိ ကားတွေကလည်း ရပ်စရာ နေရာ မရှိနဲ့ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။ တော်တော်စိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကားပါကင် ကိစ္စ တိုက်တွေ ဆောက်ပြီး ပါကင်မရှိဘူး။ ပလက်ဖောင်းတွေကလည်း တဆက်တည်း တညီတညာ လမ်းလျှောက်လို့ ရတဲ့ လမ်းက သိပ်မရှိလှဘူး။ လမ်းမတွေ ချဲ့တော့ ပလက်ဖောင်းတွေ ပါသွားမယ်။ ကားတွေ ရပ်မယ် သွားမယ် လူတွေ လမ်းလျှောက်စရာ မရှိဖြစ်မယ်။ လမ်းပေါ် တက်လျှောက်ရမယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်တာ ကားကြပ်တဲ့ အခါ လူတွေလည်း ဘေးမကင်းတော့ဘူး။
ကားတွေ များတာ ကို မပြောလိုပေမဲ့ ကားရပ်ဖို့ တခုခုတော့ စဉ်းစားပေးသင့်တယ်။
ကားပါမစ် ကိစ္စနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာ သိပ်တော့ မဆွေးနွေးတက်လို့ ဖတ်သွားတယ်။
စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာလေး လာရေးသွားတယ်။
ဒီတခါတော့ နီးစပ်လာပီ။ကားလေးနဲ့ တူတာလေး ဝယ်စီးနိုင်တော့မလားလို့ ပါ။
စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သတ်လို့အလျင်စလို သိပ်မလုပ်ကြနဲ့ 
အောင့်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေပဲ….လောဘသမားတွေ သတိထားကြ..
အူးဗိုက်ကလေးတို့ ကတော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အင်မတန်ကင်းရှင်း၏ ။
ဘာရုပ်ဝတ္ထုမှလဲ ကိုယ်မှာမရှိ.အားလုံး ဗလာနတ္ထိ ။ ဒါကြောင့် အထင်တော့ မသေးကြနဲ့ ဦး..
အများကြီးဆံ့အောင် ရှိသမျှ အကုန်ဖယ်ထုတ်ထားတယ်လို့ မှတ်ပေး..နော..။
ရုံးဆင်းပြီးမို့ကြားကားနဲ့ မတိုးအောင် ကားဂိတ်ကို ပြေးပဟေ့..
အလကား မနေ့က ကျွန်တော်သား ကားတစ်စီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ သွားဝယ်တာ ဈေးတွေလည်းမကျဘူး။ ကော်စေ့ဈေးတွေတက်နေလို့တဲ့
အစိုးရပေါ်လစီကိုဘဲ ရန်လုပ်ရတော.မှာဘဲ ….။
အမှန်တိုင်းပြောရင် ကားဈေးကျတာကောင်းပါတယ် …ရှိသင်.တဲ.အတိုင်း ဖြစ်သွားတာပေါ. ..
သို.သော် …..အစကတည်းက မဖြစ်သင်.တဲ.ဈေးဘာလို.ဖြစ်စေခဲ.သလဲ …ဘတ်စ်ကားနဲ. Taxi ကို
ဘာလို. အရင် အသစ်မချိန်းခဲ.သလဲ ….အရှက်မရှိ စက်မှုဇုံထုတ်ဆိုပြီး ..သံပြားအစုတ်တွေ ၊ အဟောင်း
အစုတ်တွေနဲ.သူများကားပုံတူတွေကို ခိုးချခွင်.ပြုခဲ.သလဲ …. ပြောရရင်အများကြီးဘဲဗျ ….။
အသုံးမကျတဲ.စက်မှုဇုံကားတွေနဲ.ပြည်သူ.ပိုက်ဆံလည်း လေလွင်.ပေါင်းများပြီ ။ တော်ကြာ ဘယ်မောင်း
ဘဲသွင်းရမယ် ၊ တော်ကြာ ညာမောင်းဘဲသွင်းရမယ်ဆိုပြီး အဆင်.မမှီတဲ.တရုပ်ကား အညံ.တွေနဲ.
ပိုက်ဘောလည်းမိခဲ.ကြပြီ ……ကုန်တင်ကားတွေထဲလည်း တရုပ်ကားတွေ ကြံ.ခိုင်ရေးမကောင်းကြောင်းလဲ
ခဏခဏ ကြားနေရတယ် ။ ဘာနဲ.တူသလဲဆိုတော. …ကျုပ်တို.အစိုးရက ပုံပြင်ထဲက မြည်းတစ်ကောင်
၀ယ်ပြီး ထမ်းလာကြတဲ. ငကြောင်သားအဖနဲ.တူနေပြီ ။ ကြီးကြောင် ၊ ကြာပေါ ဆိုတာ သူတို.ကိုပြောတာ
ကိုနေးချားရဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ပြောချင်တာတွေ တပုံကြီးပေါ်လာတယ်။ မန္တလေးပွဲထိုင်လဘက်စားသလို နဲနဲစီ ဟိုတတို့ဒီတတို့ပြောရတော့မှာပဲ..။
အစိုးရရဲ့ လုပ်သင့်တာတွေမလုပ်ပဲ မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်တာ တွေကိုတော့ တန်းစီပြောရင်လဲ ဦးပုညရဲ့ ဒေါနဆီမေတ္တာစာထဲကလို- (ဟောရင်းသာ ပျံတော်မူ) ရလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ သူ့ချာတူးလန်ပုံ(ရွာထဲကတူမလေးမဟုတ်)ကို ပြောနေရမှာထက်
လေးတန်းအောင်လောက်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိရင် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေး နဲနဲဝင်ပြောချင်တာ-
ပထမ ဦးစားပေးသင့်တာကတော့ – လူတိုင်းကားစီးနိုင်ရေး မဟုတ်ပါဘူးနော
လူတိုင်း အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှု့ရေးစောင့်ရှောက်မှု့ရနိုင်ရေး
လူတိုင်း အမိုးအကာနဲ့ နေထိုင်နိုင်ရေး
အဲဒါ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးမှ – လူကြားကောင်းအောင် နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်သည်တို့
ဘာတို့တော့ လာမလုပ်ပါနဲ့… အဲဒီသောက်ရှက်မရှိစကားမျိုးက အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်ပြီးကတည်းက လူလိမ်နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း ထည့်ပြောနေကျမို့
တကယ်သာ ပါမစ်ဖြစ်စံနစ်ဖြစ်မလာပဲ ကားဟောင်းတွေသံရည်ကြိုရမယ်ဆိုရင် ကားဟောင်းပိုင်ရှင်လေး တွေလက်ထဲ ရှိတဲ့ကားက သုညတန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီးထိုင်ငိုနေမယ်လို့မြင်ယောင်မိတယ်။
ဒီနိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်စီးချင်တာရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ-
၁-ကားဆိုတာ လက်ပတ်နာရီလို ဘိနပ်လို ၀ယ်သုံးပြီးရင် တနေ့စွန့်ပစ်ရမယ့်ပစ္စည်းလို့- အမှန်အတိုင်း မထင်မြင်အောင်လုပ်ထားလို့ (အဲဒါအစိုးရကတမင်လုပ်ထားတာ)
၂-အများသုံးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆိုင်ရာ- ဆိုက်ကား၊ တက္ကစီ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထား ဘာတခုမှ အဆင်ပြေအောင်လုပ်မထားလို့ (အဲဒါ အစိ်ုးရရဲ့ ရာနှုံးပြည့်တာဝန်၊ အဲဒီတာဝန်ကို ဘယ်အစိုးရမှ ကျေပွန်ခြင်းမရှိပါ။)
၃-ပြည်သူတွေကို သွားစရာနည်းအောင် တစတစစီမံပေးရမယ့်အစား အလကားနေရင်း သွားစရာတွေများအောင်လုပ်ထားလို့။(အဲဒါ အစိုးရရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု့မှတ်ကျောက်)
၄-ကားဈေးနှုံးတွေက ဖြစ်သင့်တာရဲ့ အဆများစွာဖြစ်နေတော့ ကားဆိုတာ ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေရဲ့ အဆောင်အယောင်တခုအဖြစ် အထင်မှားပြီး – ကားစီးသူကို အထင်ကြီးမော့ကြည့်ရင်းကနေ ကိုယ်လဲ အဲလိုဖြစ်ချင်လာကြလို့။ (အဲဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်က -င်ယားတာကတ၀က်၊ အစိုးရကြောင့် အမှိုက်ပုံသွားပစ်ရမယ့်ကားမျိုးကို ရွှေတပိဿာဘိုးလောက် ဈေးဖြစ်ခဲ့တာက တ၀က်)
၅-ကိုယ့်မှာ ငွေပိုငွေလျှံ့လေး အနည်းငယ်ရှိလာလို့ မိသားစုစီးကားလေးတစီး သက်တောင့်သက်သာဝယ်စီးချင်လို့။ (အဲဒါကတော့ အမှန်တကယ် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။ အဲဒါကတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ )
ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမဏီတွေအားလုံးကို သူများနိုင်ငံတွေလို အပြိုင်အဆိုင် ဝယ်ရောင်းခွင့်ပေးရင် ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ အစိုးရက သူများနိုင်ငံတွေ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကို နမှုနာယူသင့်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် နောက်ဆုံး အစိုးရနဲ့ မနီးစပ်တဲ့ လူတွေပဲ နစ်နာရတာပေါ့။ တိုယိုတာက စလို့ ဟွန်ဒိုင်းအထိ ဈေးရောင်းသလို အပြိုင်အဆိုင် ကုမဏီတွေရောင်းကြည့်ပါလား။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကားဈေးတွေ အငြိမ်မနေဖြစ်တော့မှာလဲ။ ကားရောင်းလည်း အစိုးရပါတယ်။ အကယ်ဒမီပေးလည်း အစိုးရက ဝင်ရှုပ်တယ်။ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင် တိုးရစ်အိမ်သာထားတဲ့အထိ အစိုးရက ဝင်ရှုပ်တယ်။ ဒီလိုမဖြစ်တဲ့နေ့ ဟာ ကားတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ စီးရတဲ့နေ့ ပဲ။ အစိုးရ ဝန်ကြီးတွေကို သနားလို့ ပါ။ သူတို့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြောသလို ဖြစ်လာဖို့ အတွက် ကားစီးသူတွေ ဝယ်ရောင်းတွေအားလုံး ဒို့ အရေး အော်ကြပေါ့။
မှန်ကန်ခိုင်မာတည်ငြိမ်တဲ့ပေါ်လစီမဖြစ်သေးပဲ အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဖင်မနိုင်ခေါင်းမနိုင်နဲ့ ဒိထက်အဆပေါင်းများစွာဆိုးရွားတဲ့ ကားဂျမ်းနဲ့လမ်းပျက်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်ထင်မိတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်သူတွေ အကျိုးကိုကုန်သည်ပွဲစားမခံပဲတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ကုန်ပစ္စည်းတွေ တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူဖို့ သမ၀ါယမ အဖွဲ့တွေဖွဲ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အကျိုးဆက်ကတော့ ၀န်ထမ်းကတော်တွေ ပွဲစားဖြစ်ကုန်ကြတာပါပဲ။ အပြင်ဈေးနဲ့သက်သာတဲ့အတွက် စားသုံးသူတွေကလည်းခွဲတမ်းတွေကို ထုတ်ရောင်းပြီးအမြတ်တွေရခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ဆို သမခွဲတမ်းစာအုပ်နဲ့ ပစ္ဏည်းထုတ်စရာမလိုပဲ အချိန်တန်ရင်အမြတ်ငွေ သွားထုတ်ရုံပါပဲ။
…အကယ်ဒမီပေးလည်း အစိုးရက ဝင်ရှုပ်တယ်။….
ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဂေဇက်တက်အော်ဖစ်ဆာ လူကြီးတွေတက်ရောက်တယ်ဆိုတာ ချီးမြှောက်တဲ့သဘောလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီလိုအခမ်းအနား တခုကို ရ၀တဥက္ကတက်ရောက်တာနဲ့ ၀န်ကြီးတက်ရောက်တာ အဓိပါယ်ကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ အဖွဲ့အစည်းကို အားပေးတဲ့သဘောလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကိုမတက်ပဲ ကျွန်တော်တို့က ဘေးကကြည့်ပြီးဒီလိုပြောနေပေမဲ့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ ဒီလိုမြင်မယ်လို့ မထင်ပါ။
ပြည်သူတွေ ရုံးသွားရုံးပြန် ဘတ်စကား စီးရင်အဆင်ပြေအောင် လုံခြုံ
မှုရှိအောင် အချိန်မှီရုံးကိုရောက်အောင် ဘတ်စကားတွေများလာအောင်
ထင်ပါတယ်။သိန်း၁၀၀ အောက်ကားစီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ သာမာန်ပြည်သူ
တွေနဲ့ဝေးနေအုံးမှာပါ ။ သူဌေးတွေရှုံးတာ သူတို့အလုပ်ပါ သာမန်လူ
ကုန်သည်တွေဆိုတာရှုံးမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ မရှုံးဖူးတဲ့ကုန်သည်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ကားဝယ်ဒါ ပါမစ်၊ အခွန်နှင့် ကုန်သည်ဆိုမှဒေါ့ မောင်းဖို့ ဆီဖိုးရော ကျန်ဘာအုံးမလားဗျာ..။ အဲလိုဆိုဒေါ့လည်း ပျော်ပျော်ဂျီး တွန်းဂျဒါပေါ့.. ယံပံနပေ ဘေလေဆပ် ဗေလေဆပ်…
နိုင်ငံတော်အစိုးရကစေတနာနဲ့( ဦးဦးပါလေရာကြီးကိုကြောက်လို့ စေတနာနဲ့ဆိုတာလေး ကျော်ဖတ်ပေးနော် ) export tax 10% ကိုလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။ export ၀င်လာတဲ့ TT ငွေတွေကိုလည်း နဂိုလို သဘောင်္ထွက်တဲ့အထိစောင့်စရာမလိုပဲ ရောင်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက် exporterတွေအတွက် အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ export tax ၁၀% ကောက်လို့ တောင်သူတွေ ထ်ိခိုက်တယ်ဆိုပြီး လျှော့ပေးခဲ့ပေမဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ပဲဈေးတွေဆက်ကျတဲ့အတွက် တောင်သူတွေလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော်ကလည်း အခွန်ငွေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ export tax 10% ဟာ ပဲဈေးကို မထိမ်းနိုင်ပါဘူး။ tax ကိုလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်FOB ဈေးတွေကိုချဝယ်လာကြတဲ့အတွက် တောင်သူတွေအတွက်လည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။
အခု ကားဈေးတွေ မတရား ကျနေတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်လာမယ် ထင်သလဲ.. အဲဒီ မျှော်မှန်းချက်လေးတော့ သိချင်သား။
ကား အဟောင်းတွေ ဈေးတွေ မတရားကျတယ် အရင်က ပါမစ်လေး ကြောင့် ကျနေတဲ့ ဈေးတွေ ပြန်လန် နေအောင် တက်သွားတယ်။
အခု ပါမစ်မလိုဘူး ဆိုတော့ ဈေးတွေ ထပ်ကျတယ်။
အခု သိသလောက်တော့ ကားတွေ အရမ်းဝယ်နေကြတယ် ကြားတယ်။
ရွှေဈေးတွေ လည်း ကျတယ်။
ကားတွေ အ၀ယ်လိုက်တော့ ဒေါ်လာဈေးတော့ ပြန်တက်နေပြီ။
သမီးတွေကလဲ သူတို့ကြိုက်တာ သုံးချင်မှာပဲ၊ သားတွေကလဲ သူတို့ကြိုက်တာ သုံးချင်မှာပဲ
အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သူကတော့ ဘယ်ဟာကို အရင်ဦးစားပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုပိုအကျိုးရှိအောင်သုံးရမယ် ဆိုတာကို
အဲလို စီမံတတ်တဲ့မိသားစုက ရေရှည်မှာ ကောင်းစားသွားပြီး
အဲလိုစီမံမှု့မှာ ညံ့ဖျင်းတဲ့မိသားစုက ရေရှည်မှာ မြောင်းထဲ (WLD) ရောက်သွားမှာပါ။
လောကမှာ မမှားတဲ့သီအိုရီက ကိုယ်စိုက်တာ ကိုယ်ရိတ်သိမ်းရပါတယ်။
အိမ်စီးကား တစီးကို ဟိုဘက်မှာကုန်ခဲ့မယ့် ငွေ (လေလံဈေး+ အကျိုးဆောင်ခ+ ဆိပ်ကမ်းပို့+ ရေဒီရေးရှင်း+ သင်္ဘောတင်) ပျှမ်းမျှ ဒေါ်လာ 7000 လို့ မှန်းမိတယ်။ အခုမူသစ်အရဆို မကဘူး 9000 လောက်များဖြစ်မလားမသိဘူး။
တစီး 7000 × အစီး 100000 = သန်း 700 ဘိုးရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကဏ္ဍ ၀င်ငွေရဲ့ တနှစ်ခွဲစာ
သို့မဟုတ် သားငါးကဏ္ဍ၀င်ငွေရဲ့ နှစ်နှစ်စာ
သို့မဟုတ် ပဲ အမျိုးမျိုးတင်ပို့ငွေရဲ့ နှစ်နှစ်ခွဲစာ
အဲဒိတ၀က်လောက်နဲ့ မီးစက်ကောင်းကောင်း ၀ယ်ရင် ဘယ်နှစ်လုံးလောက်ရမလဲမသိ ???
လျှပ်စစ်ကတော့.. လက်ပူတိုက်နည်းထက်.. ရေကာတာလုပ်ပြီး.. တနိုင်ငံလုံးအတွက်..အနှစ်၂၀လောက်မျှော်လုပ်ကြစေချင်ကြောင်း..
ရှိပြီးသားရေကာတာတွေတောင် မီးမထွက်တဲ့အပြင် အဲဒါတွေကြောင့် နှစ်တိုင်းရေကြီးနေတာကို…
ကျုပ်က မြစ်ဆုံကလွဲရင် အခြားနေရာတွေမှာ ရေကာတာဆောက် လျှပ်စစ်ထုတ်ဘို့ကို မူအားဖြင့် အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံပါတယ်။
မီးတကယ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့ သူများဆီကဟာတွေကို သွားအတုယူဘို့တော့လိုမယ်…
လက်ရှိက ပြည်တွင်းရေအားလျှပ်စစ်တွေမှာ စက်တပ်ဆင်အားက မီဂါဝပ် ၃၆၀၀ ခန့်လို့ ထင်မိတယ်။ တကယ်ထုတ်နိုင်တာက မိုးအများဆုံး ရေအပြည့်ဆုံးအချိန်မှာ မီဂါဝပ် ၁၆၀၀ လောက်ပဲလို့ထင်တယ်။
ပြီးတော့ ဒမ်တွေကို မကိုင်တွယ်တတ်လို့ နှစ်တိုင်းရေကြီး သီးနှံပျက်တယ်…။
တကယ်တော့… နှစ်ခုသုံးခုမက မှားနေတယ်…။
နှစ်ခုသုံးခုမမှားပါဘူး။ မှားတာက တခုတည်းပါ။ အဲဒါကတော့….
…အဟီး… ဦးဦးပါလေရာ သမတ မဖြစ်တာပါပဲ။
ကျုပ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင် ထောက်ခံမဲတစ်မဲတော့ ရမယ့်သဘောပဲ…..